Venezoelà: Tsy alefa intsony ny fandaharana Ry Simpson · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 7:28 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, عربي, Français, Español, Português, فارسی, English
Toa tsy dia mankasitraka loatra ny sarimiainan'i Matt Groening “Les Simpson” ny governemanta venezoelana. Noraràna tsy ho azo alefa tamin'ny fantsona fahitalavitra tsy miankina ao Venezoelà, noho ny baikon'ny governemanta, ity fandaharana mitohy amerikana ity. Heverina fa nahazo fitarainana maromaro ity sampan-draharaham-panjakana ity satria nalefa tamin'ny 11 ora atoandro Ry Simpson. Hafahafa ihany raha nahazo fitarainana tao Venezoelà ity fandaharana nanana ny lazany efa ampolony taona maro ity. Saingy niteraka fahatafintohinan'ny vahoaka ity fandraràna, nambara tamin'ny fandaharana tselatra manokana, ity. Tsy noho ny fahatampohany ihany fa noho ny fanoloana ny fandaharana nisy azy ho lasa “Alerte à Malibu”.
Avy any Arzantina, amin'ny “Blogus”, fanehoan-kevitra iray masiaka kokoa:
Namaly ihany koa ny bilaogy Noticias y entretenimiento [es]:
Milaza i Periodista digital [es]: